ကြွယ်ဝသောယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်လှပသောရှုခင်းများစဉ်းစားအပြင် ဆန်မာရီနို , ခရီးသွားဧည့်များ၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်တိုင်းပြည်အတွက်လာ စျေးဝယ် ။ ဆုံးဣနြေ္ဒသမ္မတနိုင်ငံတစ်အခွန်လွတ်ဇုန်ဖြစ်ပြီး, သူကပဲအလိုအလျှောက်အားလုံးလက်ရှိစျေးနှုန်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် 20% ရှိပါတယ်လျော့ကျစေပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး အီတလီနိုင်ငံ ဥပမာ။
ဆန်မာရီနိုခုနှစ်တွင်, 10 အလတ်စားနှင့်အကြီးစားဆိုင်များတွင်တင်ဆက် 70% မှ 30% ကနေအတိတ်ရာသီ၏ဒီဇိုင်နာ collection များကိုအပေါ်တစ်နှစ်ပတ်လုံးအထူးလျှော့စျေးလည်ပတ်ရာ။ ထွက်ပေါက်အတွက်သည် Periodic အရောင်းစျေးနှုန်းကျဆင်းခြင်းစဉ်အတွင်းတစ်နှစ်ပတ်လုံးနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကနှစ်ဆသိရသည်။ ဒါဟာပုံမှန်အားဖြင့်ဇန်နဝါရီ, ဖေဖော်ဝါရီ, ဇူလိုင်လနှင့်သြဂုတ်လအတွင်းကရာအရပ်ကိုကြာပါသည်။
လက်လီအာကာသ၏အရွယ်အစားနှင့်အဖွဲ့အစည်းအတွင်း, အပြင်ရောင်းချမှုများအတွက် collection များကိုများ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်ကိုအပေါ်နှစ်ဦးစလုံးကွဲပြားခြားနားသောဆိုင်များတွင်ဆန်မာရီနို။ သူတို့အဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးနှင့်လူကြိုက်များဖို့စဉ်းစားပါ:
(- Big chic တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားလမ်းအတွက်) - ဆန်မာရီနိုစက်ရုံစက်ရုံပြင်ပ, အသက်အကြီးဆုံးစျေးဝယ်ဆိုင်များတွင်တစ်ခုဖြစ်သည်ခရီးသွားများကြားတွင်အလွန်ရေပန်းစားသည်။ 40 ခန့်ယောက်ျားကိုယ်စားပြုကြောင်းစတိုးဆိုင်များ, မိန်းမနှင့်သားသမီးရဲ့အဝတ်အစားတွေအီတလီနှင့်နိုင်ငံတကာအမှတ်တံဆိပ်, ရေမွှေး, အိတ်, ဆက်စပ်ပစ္စည်း, လက်ဝတ်ရတနာနှင့်ပိုပြီးရှိပါတယ်။ သငျသညျအနည်းငယ်ပျှမ်းမျှ (အယ်လီနာ Miro, Calvin Klein, ရေခဲတောင်, အန္န Rachel, Cerruti, Facis, Datch, Borbonese) အထက်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စျေးနှုန်းများမှာအစုလိုက်အပြုံလိုက်-စျေးကွက်အစိတ်အပိုင်းများ၏နယ်ပယ်ကနေရညျအသှေးတ်အထည်များနှင့်ဖိနပ်ရှာနေလျှင်သူသည်သင်တို့ကိုကိုက်ညီပါလိမ့်မယ်။ (ထိုကဲ့သို့သော Armani, Baldinini, ဝေး, Pollini, Prada, D ကို & G မှာကဲ့သို့) ဇိမ်ခံအမှတ်တံဆိပ်၏ရွေးချယ်ရေးသေးငယ်တဲ့ဖြစ်ကြသည်။ သင်တို့အဘို့အဦးစားပေးဆန်မာရီနိုစက်ရုံမှကြိုဆိုတဲ့အမှတ်တံဆိပ်ပေမယ့်အရည်အသွေးနှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်း, မပါလျှင်။ အဆိုပါကုန်တိုက် 10.00 ကနေ 19,30 ရန်, တနင်္လာနေ့ မှလွဲ. နေ့တိုင်းဖွင့်လှစ်သည်။ စနေနေ့နှင့်တနင်္ဂနွေတွင် - နာရီဝက်ပိုရှည်သည်။
Arca အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Megastore - ဇိမ်ခံကားအမှတ်တံဆိပ်၏ဒီဇိုင်နာ collection များကိုတင်ဆက်သောဤထွက်ပေါက်: ရုံ Cavalli, Versace, Armani, Ferre, Blumarine, Galliano နှင့်အခြားသူများ။ ဒီနေရာတွင်ယခင် collection များကိုထံမှ, ဒါပေမယ့်လည်းဘာလို့လဲဆိုတော့လက်ရှိမသာသောအရာတို့ကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ဒီထွက်ပေါက်စတိုးဆိုင်တစ်ခုအခြို့သောအရေအတွက်ပုံစံတင်သွင်းမဟုတ်ကြောင်း, သို့သော်, မှတ်ချက်နှင့်ကြီးမားသောရောင်းအားဧရိယာ၏ပုံစံဖြစ်သည်။ သငျသညျဖောက်သည်တောင်းဆိုဖို့နေသားတကျဖြစ်ကြောင်းနှင့်ဖက်ရှင်ဖက်ရှင်ဆိုင်များအတွက်ဝတ်စားဆင်ယင်ဖို့ပါလျှင်ထိုအကြောင်းကြောင့်, အခြေအနေကသငျသညျစိတျပကျြနိုငျသညျ။ သငျသညျတတ်နိုင်စျေးနှုန်းများမှာဒီဇိုင်နာများဦးဆောင်သောအရာတို့ကိုမဝယ်ချင်လျှင်သင်သည်ထွက်ပေါက် Arca ချဉ်းကပ်ပါလိမ့်မယ်။ ထွက်ပေါက် 09,00 ထံမှ 20,00 မှတနင်္လာနေ့ကနေစနေနေ့မှဖွင့်လှစ်သည်။
ဘုရင်မစက်ရုံပြင်ပအရှိဆုံးကြော့နှင့် upscaling စျေးဝယ်ဆိုင်များတွင်တစ်ဦး၏ status ရှိပါတယ်။ ဒီနေရာတွင်ဇိမ်ခံနှင့်စျေးကြီးနှင့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ဝယ်ဘို့တတ်နိုင်အမှတ်တံဆိပ်နှစ်ခုလုံးကိုတွေ့လိမ့်မည်။ ထွက်ပေါက်အီတလီနှင့်ဥရောပကတခြားအမှတ်တံဆိပ်များ၏ဆိုင်များနှင့်ဖက်ရှင်ဆိုင်များအတွက်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ဒါဟာတနင်္လာနေ့မှသာ 10.00 ကနေ 20,00 မှပြေးနှင့် - 16,00 မှ။
တစ်ဦးချင်းစီကတခြားဆန့်ကျင်ဘက်တည်ရှိသောဆိုင်များတွင်ဆန်မာရီနိုစက်ရုံနှင့် Arca အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Megastore, သငျသညျတူညီသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှာသူတို့ကိုရနိုင်အောင်။ များသောအားဖြင့်ငါမီးရထားဘူတာရုံ№4များ၏ရှေ့မှောက်၌ရပ်တန့်နှင့်အတူ Rimini ကနေထွက်ခွာရာဘတ်စ်ကား№7ကဒီနေရာမှာလာကြ၏။ ထွက်ပေါက် strada Rovereta အပေါ်№7ရပ်တန့်နှင့်ထွက်ပေါက်မှ7မိနစ် Censiti လမ်းပေါ်လမ်းလျှောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ € 1,2 နှင့် 30-40 မိနစ်ကြာစေရန်ဘတ်စ်ကားပေါ်တွင်ယာဉ်စီးခ။ တက္ကစီအားဖြင့်သင်တို့ကို 20-25 မိနစ် get, နှင့်စီးနင်းသင်သည်€ 35-40 ကုန်ကျမည်ဖြစ်သည်။
ဘုရင်မစက်ရုံပြင်ပ Rimini ကနေ 10 ကီလိုမီတာနှင့်ဆန်မာရီနို၏နယ်စပ်ကနေ 1 ကီလိုမီတာဖြစ်ပါတယ်။ လွယ်နေရာဒေသမှကားဖြင့်လက်လှမ်း Serravalle အဝေးပြေးလမ်းမကြီး A14 အပေါ်, ပြီးတော့သင်ကလိပ်စာသို့သွားသင့်တယ်: Tre Settembre,3။
ဆန်မာရီနိုအတွက်စျေးဝယ် Going ကျနော်တို့ဇွန်လကနေစက်တင်ဘာလစောစောပိုင်းမှခရီးသွားဧည့်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်အကြီးစားရောက်လာကြောင်းသတိပြုပါရမည်ဖြစ်သည်။ ဤသည်ကို run အဝတ်အစားအရွယ်အစားအလွန်လျင်မြန်စွာရောင်းထွက်နေကြတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုစေပါတယ်။ ထိုကွောငျ့, သငျသညျထိုကဲ့သို့သောစိတ်ပျက်စရာ၏ဖြစ်နိုင်ခြေများအတွက်အဆင်သင့်မဟုတ်မှန်လျှင်, ဤကာလအတွက်ကြောင့်ခရီးသွားဧည့်ထွက်ပေါက်တို့တွင်အသေးစားနှင့်လျော့နည်းလူကြိုက်များသွားရောက်လည်ပတ်ရကျိုးနပ်သည်: အတ္တလန္တိတ်စျေးဝယ်စင်တာ, Azzurro စျေးဝယ်စင်တာ, စက်ရုံပြင်ပ Calzaturificio ။ သငျသညျအိမ်သုံးပစ္စည်းနှင့်တယ်လီဖုန်းစိတ်ဝင်စားလျှင်, ပွင့်လင်းအီလက်ထရောနစ်စျေးဝယ်စင်တာကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်။
မက်ဆီဒိုးနီးယား - ဗီဇာ
နော်ဝေ - အထိမ်းအမှတ
အဆိုပါရှာပုံတော်ကဘာလဲ - ရှာပုံတော်အမျိုးအစားများနှင့်၎င်းတို့၏ကျမ်းပိုဒ်၏စည်းမျဉ်းများ
ပုံမှန်လိင်များအတွက် 10 အကြောင်းရင်းများ
လက်စထရော - ကုသမှု
နည်းစနစ် Masaru Ibuka - သုံးပြီးနောက်ကသိပ်နောက်ကျမယ့်
ထိုအ depilatory epilator - ခြားနားချက်
Shopper အိတ် - ကဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာတစ်ခုကိုကြည့်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ဝတ်ဆင်ဖို့ဘယ်လို?
Minced အသားနှင့်အတူအာလူး casserole
Multivarka အတွက် Semolina - ရေနှင့်နို့ဘို့ချက်ပြုတ်နည်းများ